Fivorian’ny parlemantera : Olom-bitsy no handany lalàna… -
AccueilSongandinaFivorian’ny parlemantera : Olom-bitsy no handany lalàna…
Fivorian’ny parlemantera : Olom-bitsy no handany lalàna…
Hiditra amin’ny fivoriana ara-potoana faharoa, amin’ity taona 2018 ity ireo parlemantera roa eny anivon’ny Antenimieram-pirenena sy Antenimieran-doholona. Hanomboka ny 16 oktobra izao izany, ary haharitra 60 andro.
Araka ny fampitam-baovao, ny solombavambahoaka voafidy tao Ambositra sady filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena, Hary Andrianarivo, no hitarika ny fivoriana eny Tsimbazaza noho ny filohan’ny Antenimieram-pirenena, Jean Max Rakotomamonjy, kandidà amin’ny fifidianana Filoham-pirenena.
Mampanahy ihany anefa ity fivoriana ara-potoana faharoa ity, satria dia mifanindran-dalana amin’ny fampielezan-kevitra. Efa saika tazana manaraka ny kandidà tohanany avokoa ny ankamaroan’ireo olom-boafidy eo anivon’ny Antenimieram-pirenena ankehitriny.
Noho izany indrindra, ho maro ireo depiote no tsy hiatrika ny fivoriana ara-potoana mandritra ny fampielezan-kevitra. Izany anefa tsy manakana ny hizoran’ny fivoriana, satria mandeha ara-dalàna hatrany izany, na vitsy aza ireo solombavambahoaka manatrika izany.
Araka izany, ahiana ho kitoatoa ny fandaniana sy fampandaniana ireo lalàna amin’ity indray mitoraka ity. Mizara roa rahateo ihany koa anefa ireo lalàna, satria misy ny lalàna fehizoro amin’izany, ary misy lalàna tsotra.
Anisan’ny hibahan-toerana sy mavesatra amin’ity fivoriana ara-potoana faharoa ity anefa ny fandaniana ny tetibolam-panjakana ho an’ny taona 2019. Tafiditra indrindra amin’ny lalàna fehizoro anefa izany. Rehefa tafiditra amin’ny lalàna fehizoro ny mahakasika ny tetibolam-panjakana dia mila mahafeno “quorum” ireo solombavambahoaka vao afaka mandeha ny fandaniana izany. Hanao ahoana izany ny mahakasika ny fandaniana ny tetibolam-panjakana 2019 , satria raha toa ka mbola tsy tratra ny “quorum” amin’ilay fanemorana, avy hatrany dia mandeha ny fandaniana na dia vitsy aza ny depiote mivory? Miankina tanteraka amin’io anefa ny fiainam-pirenena amin’ny fampandehanan-draharaha eny anivon’ireo departemanta ministerialy isan-tokony.
Manoloana ny resa-be izay mandeha tao ho ato mikasika ny fanitsiana ny lalàm-panorenana dia noezahina ny tady teknisianina havanana amin’ny lalàna sy ny fifidianana, ka anisan’ny nanaiky nitondra fanazavana ara-teknika i Thierry Rakotonarivo, izay sady ...Tohiny